Friday September 28, 2018 - 00:18:11 in Wararka by Super Admin
Daawo oo Milicso: "...Muusoow Waxa aad shaqooyinka qorataa dad adiga kaa cilmi badan" waa qudabaddii uu Jamaal Cali Xuseen sanad ka hor ka jeediyey magaalada Boorama xiligii ololahii doorashada sanad ka hor; mar ay xaflad balaadhan Hablaha
Daawo oo Milicso: "...Muusoow Waxa aad shaqooyinka qorataa dad adiga kaa cilmi badan" waa qudabaddii uu Jamaal Cali Xuseen sanad ka hor ka jeediyey magaalada Boorama xiligii ololahii doorashada sanad ka hor; mar ay xaflad balaadhan Hablaha Aqoonyahanka Reer Awdal u sameeyen murashaxa Kulmiye ee xiligaasi Muuse Biixi.
"...Muusoow Waxa aad shaqooyinka qorataa dad adiga kaa cilmi badan" waa qudabaddii uu Jamaal Cali Xuseen sanad ka hor ka jeediyey magaalada Boorama xiligii ololahii doorashada sanad ka hor; mar ay xaflad balaadhan Hablaha Aqoonyahanka Reer Awdal u sameeyen murashaxa Kulmiye ee xiligaasi Muuse Biixi.
Jamaal Cali Xuseen wuxuu halkaa ka jeediyey qudbad dhaxalgal ah oo uu Muuse ku hogatusaaleeynayo isagoo weliba Ugu duurxulaya dadka uu Muuse shaqooyinka qoranayo haddii uu ku guuleysto talada dalka. Madaxweyne Muuse Biixi Ma qaatay talooyinkii mise kursiguun buu rabay. Halkan ka daawo qudbad kooban Oo 6 daqiiqo ah miisaan culusna leh haddii uu Muuse Biixi taladaasi raaci lahaa.